Muqdisho oo qiimaha Shidaalka is badalay | KEYDMEDIA ONLINE
30 July 2021 Faahfaahin: Qaraxa xooggan oo ka dhacay Kismaayo
Muqdisho oo qiimaha Shidaalka is badalay
waxaa Saacadihii la soo dhaafay seyladaha Shidaalka lagu iibiyo ee gudaha Magaalada Muqdisho laga dareemayaa is badal ku yimid dhanka Qiimaha Shidaalka .
Warbaahinta keydmedia.net oo la xiriirtay qeyba ka mid ah Suuqyada Shidaalka lagu iibiyo ee gudaha Muqdisho ayaa ogaatay in qiimaha Shidaalka uu isbadal ku yimid marka laga tusaale qaato maalmihii hore.
"Litirkii Shidaalka saakay waxa aynu iibineynaa 28-kun oo shilinka soomaaliga ah kol hore waxa uu ahaa 35-kun oo shilinka Soomaaliga ah" sidaa waxaa keydmedia.net u sheegtay Xaliimo oo ka mid ah Haweenka Shidaalka ku iibiya Muqdisho.
Ganacsatada Shidaalka waxa ay ku sababeeyeen isbadlka Qiimaha Shidaalka ku yimid Markab weyn oo shidaal wada oo iminka ku xiran Dakada Magaalada Muqdisho.
Inta badan Ganacsatada Soomaalida waxa ay caadi ka dhigteen in qiima korar ay ku sameeyaan waxyaabaha ay tuhunsanyihiin in suuqa ay ku yar yihiin, waxaana nidaamkaasi uu ka mid yahay qaababka ganacsatada ay ku cuna qabateyso bulshada.
Qoorqoor ayaa la filayaa inuu dhawaan soo saaro liiska musharixiinta u tartamaya kuraasta Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxaaa lasoo warinayaa inuu durba cagta saaray jidkii uu maray Lafta-gareen.
Yaa ku soo baxay afarta kursi ee maanta lagu doortay Kismaayo?